Fiigicha Irreechaa Finfinneetif qophiin taasifame – Fana Broadcasting Corporate
Fiigicha Irreechaa Finfinneetif qophiin taasifame
Finfinnee, Fulbaana 7, 2012 (FBC) – Fiigicha Irreechaa Guddicha Finfinneetti gaggeeffamuuf qophiin taasifame
Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa ,Komishinii Ispoortii Oromiyaaf, Federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaa waliin ta’uu, fiigicha Irreechaa Finfinneetti fiigamu irratti midiyaaleef ibsa kennan.
Fulbaanaa 11, 2012 Magaalaa Finfinnee Addabaabayii Masqalaatti figichi kilomeetira 10 atileetootaafi hawaasa hunda hirmaachisu ni adeemsifama.
Fiigicha kanarratti badhaasni maallaqaa kanneen 1ffaa-sadaffaa ba’aniif qarshiin 50,000 hanga 20,000 kan kennamu yoo ta’u, kanneen guyyaa fiigicha seena qabeessa kanarratti hirmaataniif ammoo madaaliyaan kan kennamu ta’uu Bakaka Bu’aan Komishinii Ispoortii Oromiyaa obbo Getaachoo Gurmuu ibsanii jiru.
Irreechi nageenya ,jaalala akkasumas misooma waan ta’eef hawaasni guyyaa seena qabeessa kana irratti hirmaachuun abba carraa ta’uu akka qaban Hogganaan Itti Aanaa Biiroo Aadaa fi Turiizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deessisaa beeksisanii jiru.
Guyyaa kana hirmaattootni 50,000 ni hirmaatu jedhamee tilmaamamuun T-shertin yeroo amma qophaa’ee Waajjiraalee Aadaaf Turizimii Oromiyaa irraa hanga aanaatti ,Giddugala Aadaa Oromoofi Kutaalee Magaalaa Finfinnee hundaa kessaatti gurgurama.
Dabalataan guyyaan kun guyyaa galateeffannaa uummata oromoofi sabaaf sab-lammoota biyya keenyaa waan ta’ef haala naamusa sirni Gadaa ajajuun uummanni keenya fakkeenyummaa guddaafi bifa adda ta’een irratti hirmaachuu akka qabu eerameera.
Dhumarrattiis irreechi Hora Finfinnee qabsoo ilmaan Oromoo waggoota 150 darban haarsaan dhiigaa itti taasisifameefi bu’aa jijjirama biyya keenya keessatti galmaa’ee waan ta’eef, hawaasni keenya jaalala biyyaa,aadaa aakkasumas maddaa dinagdee ta’uu isaa hubachuun qixa sirriin dhimma itti ba’uun barbaachisaadhas jechuun obbo Kabbadaan dhaamaniiru.
Walakkaa maraatoonii Deelhiin Tsahaay Gammachuu riikardii haaraa galmeessite
Iiluud Kiipchoogeen fiigicha maaraatoonaa sa’aa 2 gadiin xumuruun akka…
Priimiyar Liigiin Sadaasa 6 fi 7, 2012 akka eegalu murtaa’e
Jilli shaampiyooni atleetiksii Dohaa Addunyaa irraa sadarkaa 5ffaa qabachuun xumure…